Cunnooyinka loo yaqaan 'Perricone diet' si miisaankaagu u yaraado sida CAANKA | Cuntada Nutri
Sergio Gallego | | Cuntada
La Cunnooyinka Perricone waa mid ka mid ah hababka miisaanka luminta ugu caansan ee maanta jira oo magaciisana ku leh a dhakhtarka maqaarka ee caanka ah iyo khabiir nafaqada oo isku magac ah. Cunnadan, marka lagu daro ballan qaadka miisaanka oo yaraada waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah, waxay hubisaa inay ka caawineyso hagaajinta xaaladda maskaxda iyo in la kordhiyo heerka tamarta ee qofka laga hadlayo. Waa cunno aad loo yaqaan maanta tan iyo dad badan oo caan ah ayaa raacay iyada si ay u lumiyaan miisaan kuna gaadho shaxan caato ah.
Cuntadani waxay isku dayeysaa inay raacdo nooc cunto ah nafaqooyin badan intii suurtogal ah oo iska ilaali habka khafiifinta ee waxa loogu yeero cunnooyinka mucjisada markasta. Si kastaba ha noqotee waa cunno aad loo dhaleeceeyay oo laga niyad jabay tiro badan oo xirfadlayaal ah iyo khabiiro nafaqada ah oo u arka inay tahay hal cuno oo mucjiso badan leh oo leh saameyn rebood oo khatar ah.
1 Waa maxay cuntada Perricone?
2 Tobanka koox ee cuntada ee Perricone diet
3 Liiska cuntada maalinlaha ah
4 Faa’iido darrooyinka ku jira cuntada Perricone
Waa maxay cuntada Perricone?
Dr. Perricone ayaa tilmaamay inay jiraan toban kooxood oo cunto ah oo leh noocyo nafaqooyin kala duwan ah oo aan u baahnayn inay ka dhinnaadaan cuntada maalinlaha ah ee qof kasta oo doonaya inuu lumiyo tiro badan oo kiilo ah. Si looga fogaado culeyska iyo kiilada, cuntada ayaa kugula talineysa inaad iska ilaaliso sida ugu macquulsan isticmaalka sonkorta kuna beddel alaabada kale ee caafimaadka leh sida malabka ama stevia.
Wuxuu kaloo kugula talinayaa inaad iska ilaaliso cunista qamadiga ama bur bur maadaama aysan lahayn nafaqooyin ayna yihiin kalooriyo aad u tiro badan jirka. Alaabada kale ee ka mamnuuc ah cunnooyinka noocan ah waa dufanka hydrogenated sida ku dhac margarine ama subag.
Tobanka koox ee cuntada ee Perricone diet
ka toban kooxood oo cunto ah difaacay cuntada Perricone waa kuwan soo socda:
ka Omega-3 asiidh dufan ah Runtii waxtar ayey u leeyihiin jirka maadaama ay siiyaan dufano caafimaad qaba. Waxaa laga helaa cuntooyinka ay ka mid yihiin kalluunka salmon, tuna, sardines, ama ukunta.
Midhaha ay yihiin hodan ku ah fiber waxayna ka caawiyaan qancinta rabitaanka cuntada sida ku dhacda tufaax iyo canab.
Miraha dufanka badan sida avocado. Dufanadan ayaa caafimaad u leh jirka waxayna caawiyaan xakameeyo kolestaroolka dhiigga.
Dhir udgoon sida qorfaha, lowska, ama doogga. Wixii dhir udgoon Perricone ayaa muhiim u ah cuntada maadaama ay ka caawinayaan inay ka fogaadaan heerarka sonkorta dhiiga ku jira oo ay yihiin badal aad ufiican cusbada.
Chili waxay leedahay a xoog anti-bararka waxayna kaa caawineysaa inaad dardargeliso dheef-shiid kiimikaadka taas oo kuu oggolaaneysa inaad ka takhalusto kalooriyada hab aad u dhakhso badan.
Looska sida iniinta, iniinta ama abuurka bocorka. Waxay hodan ku yihiin dufanka omega 3 dufan waxayna ku jiraan xaddi badan oo borotiin ah.
Cunnooyinka sida digirta ama misirku waxay hodan ku yihiin faybarka oo way caawiyaan gub baruur si dhakhso leh oo hufan marka loo eego noocyada kale ee cuntada.
Yoogurt maadaama ay tahay a cuntada probiotic Waxay ka caawisaa hagaajinta dhirta mindhicirka waxayna sidoo kale hodan ku tahay kalsiyum.
Badarka sida oats ama shaciir runti waa kuwo nafaqo leh oo leh faybar badan.
Khudaarta sida broccoli, isbinaajka, ama salad. Cuntooyinkan waa kaloriin yar aadna hodan ugu ah fiitamiinnada iyo fiber.
Liiska cuntada maalinlaha ah
Cunnadu waxay kula talisaa cabitaanka 2 koob oo biyo ah sida ugu dhakhsaha badan ee aad u kacdo, maadaama sidan oo kale sunta jidhka ku jiri karta la tirtiro.
Quraac: Waxay ka koobnaan kartaa hal tortilla saddex cad lagu daro gabal midho ah oo ay la socdaan koob oatmeal caano ama caano fadhi. Ma haysan kartid rooti ama kafee ama cabitaan.
Qado: Waad yareyn kartaa salmon la dubay oo ay weheliso salad cagaaran oo ku labisan saliid saytuun ah iyo gabal khudrad ah. Waa muhiim inaad cabto 2 koob oo biyo ah inta aad wax cunayso.
Cunto fudud Inta lagu jiro cuntada fudud waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato yogurt dabiici ah oo ku xigta gabal khudrad ah iyo koob biyo ah.
Casho: Waxaa loo oggol yahay in la cuno xoogaa tuna ah oo la dubay oo ay weheliso salad cagaaran oo lagu xardhay saliid saytuun ah iyo gabal khudrad ah Inaad cabto 2 koob oo biyo ah intaad wax cunayso.
Waxaa loo oggol yahay in la cuno subaxa dhexe sacab muggeed oo lows ah ama xoogaa miro ah si aad u qanciso gaajada oo aadan u gaajoon waqtiga cuntada, halka ay muhiim tahay in la cabo qiyaastii laba litir oo biyo ah maalintii si jirka uu u ahaado mid si qumman u qoya.
Faa’iido darrooyinka ku jira cuntada Perricone
Sida cunnooyinka kale ee loogu yeero, waxay bixisaa natiijooyin wanaagsan waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Gaar ahaan, cuntada loo yaqaan 'Perricone diet' waxay dammaanad qaadeysaa in xoogaa lumiso 8 kiilo hal bil gudaheed. Xaqiiqadani waxay keenaysaa in haddii aysan jirin wax isbeddel ah oo ku yimaada caadooyinka cunidda, aad aakhirka soo ceshanayso dhammaan miisaanka lumay cabsida laga qabo saameyn rebound Shaki la'aan waa halista ugu weyn ee noocan ah cuntada, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la beddelo caadooyinka marka cuntada la dhammeeyo oo la doorto cunto caafimaad leh oo dheellitiran inuu kaa caawiyo inaad ilaaliso culeyska ugu habboon oo ay weheliso leyliska jimicsiga si joogto ah. .
Cillad kale oo weyn ayaa ah inay tahay cunto aan dheellitirnayn iyo inaysan siinaynin dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah jirka. Taasi waa sababta ay qatar u tahay in waqti dheeri ah lagu sii dheereeyo tan iyo inta jirku ku xanuunsan karo dhibaatooyin caafimaad oo daran.
Iyada oo ay jirto cillado iyo khasaarooyinkan, cuntada Perricone waa mid ka mid ah hababka miisaanka luminta ugu caansan adduunka waana jiraan kuwo badan caanka ah kuwaas oo u ololeeyay noocan ah cuntada. Dhexdooda, daafaca joogtada ah wuxuu ahaa Boqoradda Spain waana taas Marwo Letizia waxay noqotay xayeysiinta ugufiican nooca noocan ah.
Haddii aad go'aansatay inaad bilowdo nooca noocan ah inaad lumiso xoogaa kiilo dheeraad ah, fiiro gaar ah u yeelo ilaa fiidiyaha xiga maadaama ay kaa caawin doonto inaad wax yar ka ogaato cuntada caanka ah ee loo yaqaan 'Perricone diet'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cuntada Perricone
Aasaaska aasaasiga ah ee kuleylinta, talo wax ku ool ah
Cunista Xeeladaha Fududeeya Calaamadaha Lagu Garto Dadka Xanuunka Arthritis-ka